Adhesive lasibatry - China Ningbo Sine
Adhesive lasibatry maharitra Magnet + Adhesive Tape (andriamby Assembly) Ningbo Sine andriamby Company Limited manufactures manodidina, kapila, mahitsizoro & hafa namboarina miendrika néodyme andriamby sy malefaka andriamby mahery manara-penitra 3M -adhesive tena kasety, na roa-misy rindrina iraisana adhesive kasety. Andriamby maharitra fitaovana izay nisafidy ny ho namatsy amin'ny adhesive horonam-peo: NdFeB andriamby N35-N54 naoty sy malefaka andriamby. Conventionally, adhesive horonam-peo dia ampiharina amin'ny tsato-kazo ny N na S-po ...
Maharitra Magnet + Adhesive Tape (andriamby Assembly)
Ningbo Sine andriamby Company Limited manufactures manodidina, kapila, mahitsizoro & hafa namboarina miendrika néodyme andriamby sy malefaka andriamby mahery manara-penitra 3M -adhesive tena kasety, na roa-misy rindrina iraisana adhesive kasety.
Andriamby maharitra fitaovana izay nisafidy ny ho namatsy amin'ny adhesive horonam-peo: NdFeB andriamby N35-N54 naoty sy malefaka andriamby. Conventionally, adhesive horonam-peo dia ampiharina amin'ny tsato-kazo ny N na S tsato-kazo ny Nickel / Zn / fingotra nopetahany takela néodyme vy bore avoakan'ireo andriamby, na ny Firenena Mikambana nopetahany takela malefaka lasibatry. Voapetaka dia azo faritana amin'ny mpanjifa.
Adhesive horonam-peo: China Rare Tany Magnet Limited manome 3M tena adhesive horonam-peo sy fahita roa-misy rindrina adhesive kasety amin'ny hatevin'ny: 0.25mm, 0.4mm, 0.5mm, 0.64mm, 0.8mm, 1.2mm, 1.6mm, 2.0mm, 3.0mm ary ny sisa. Afaka misafidy manokana mpanjifa 3M modely scotch na hatevin'ny araka ny tena fampiharana fangatahana. Ny matevina ny adhesive kasety dia, ny mahery dia ho ny adhesiveness.
Amin'izao fotoana izao, ny tena fampiasa matetika dia ahitana 3M467 adhesive horonam-peo, 3M9495LE sy 3M4945.
Fampiharana: Adhesive malefaka andriamby dia miavaka amin'ny malemy andriamby hery sy malefaka magnetization endrika sy fironana. Noho izany, dia be ampiasaina ao amin'ny sensor, fitaovana sy ny metatra, DOKAMBAROTRA, ravaka, kilalao, amin'ny raharaham-barotra karatra, finday boky, ary koa ho ampiharina bebe kokoa amin'ny ignition fiara, trano fandraisam-bahiny ambony varavarana hidin-trano, fikarakarana ara-pitsaboana sy ny fitaovana ara-pahasalamana.
Raha ny adhesive néodyme maharitra andriamby , dia manasongadina indrindra fanindrahindram mafy sy ny hatsarana tarehy. Amin'ny ankapobeny dia ampiasaina amin'ny Switches, elektronika, na fitaovana fandravahana ny trano, magneto fitsaboana, kely indrindra na lehibe Sela Mpandray Hafanana ao an-trano na ny birao rafitra fiarovana sy ny sisa.
Ny fitsipiky ny kalitao, bola, vidiny handefitra sy haingana lahateny, dia amim-pitiavana ny vao na ny ela izy hanontany mpanjifa.
Previous: Andriamby Name Tags
Manaraka: andriamby efa voavitrana